बिप्लबलाई मार्शलको पत्र « Postpati – News For All
कमरेड विप्लव नमस्कार ।
लाल सलाम भन्ने हैसियत अहिले म सित छैन ।
जहाँ रहनुस मानसिक र शारिरिक दुबै हिसावले सःकुसल हुनुहुनेछ, कामना र बिश्वास । जीवित रहँदा रहदै पनि पल पल मरीरहनु पर्ने यो कायरतापुर्ण जीवनका वस्तविकता बिचबाट जीवित लाशको दुई शब्द । तपाईसम्म मेरो यी सन्देशहरु अबश्य आइपुग्नेछन्, म बिश्वसत छु ।
कमरेड ! बाहादुरीतापुर्वक मृत्युलाई अङ्गाल्दै बाँच्नु र शिर झुकाएर बाँच्नु बिचको अन्तरलाई भोग्ने सौभाग्य र दुर्भाग्य दुबै मिल्यो । जीवन जीउनुका यी दुई बाटोमा पहिलो बाटो नै सही । तर कहाँवाट ? कसरी ? फेरी के हुन्छ ? यी यस्तै प्रश्नहरुको गोलचक्र बिचमा उभिएको छु ।
कमरेड, आज निस्वार्थ प्रेम गर्नेहरु पासबिक ढङ्गले मारिन्छन् । निर्ममतापुर्वक श्रीमतीको हत्या गर्नेहरु उन्मुक्ति पाँउछन् । गैँडा मार्ने तस्करहरु तारे होटेलहरुमा शाषकहरु सित लन्च र डिनर गरीरहँदा प्राण धन्न जँगल पसेको चेपाङहरु मारिन्छन् । दशगजामा टाउको फुटाउने मधेशीहरु धोती र भारतिय एजेन्ट भनेर अपहेलित छन् । देशको भुभाग बेचेर सत्ता र सम्पति आर्जन गर्नेहरु राता रात राष्ट्रवादी भएकाछन् ।
कमरेड, आँखै आगाडीका यी दृश्यहरु तर चुपचाप शालिक झैँ बस्नु पर्ने म । के म चेतनशील प्राणी हुँ ? के जिउनुको अर्थ यही हो ? बडेमाको घनले टाउकोमा हिर्काए झैँ ठोकिरहन्छन् यी प्रश्नहरु ।
कमरेड, यी मेरो जिज्ञासा रछट्पटीवाटै छिट्टै मुक्त हुनेछु भन्ने बिश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु ।
तपाइँले जाने बुझेको-जितमान पुन “मार्शल”
रुकुम पुर्ब ।
२०७७ श्रावण २३,शुक्रबार को दिन प्रकाशित
के नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो ?